Madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ku laabtey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ku laabtey
Madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ku laabtey
January 23, 2013 - By: Hanad Askar
Wefdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jamhuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud ayaa subaxnimadii hore ee maanta (Arbaca) dib ugu laabtey magaalada Muqdisho.
Wefdiga Madaxweynaha waxaa garoonka ku soo dhaweeyey Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari, Raysalwasaare Saacid iyo madax kale oo ka tirsan aqalka Baarlamaanka iyo xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ka soo duuley dalka Sucuudiga, halkaas oo uu kaga qaybgalay shir socdey laba maalmood oo ay isugu yimaadeen Hoggaamiyaasha dalalka Carabta isla markaana looga arinsanayey sidii loo abuuri lahaa Suuq ganacsi oo Carabta ka dhexeeya isla markaana kor loogu qaadi lahaa adeega bulshada, ganacsiga iyo maalgashiga.
Kahor inta aanu Madaxweynuhu tegin dalka Sucuudiga waxa uu booqasho maalmo qaadatey ku tegey dalka Maraykanka waxaana uu kulamo kala geddisan la qaatey madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama, Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton. Maraykanka ee ah kan dhanka dhaqaalaha dunida ugu awoodda baddan ayaa albaabada u furey Dowladda Xassan Shiikh Maxamuud waxaana ay siiyeen aqoonsi buuxa oo ay kula shaqeynayaan.
Madaxweynaha ayaa kulan la qaatey Soomaalida dalka Maraykanka ku dhaqan gaar ahaan Gobolada Virginia iyo Minnesota, waxaana ku soo dhaweeyey kumaankun qof oo uu u jeediyey khudbad. Madaxweynaha ayaa sidoo kae looga mudaaharaadey Gobolka Minnesota waxaana lagu eedeeyey in uu dalka dib ugu celinaayo 21 sano ka hor maadaama uu hor taagan yahay in maamul loo sameeyo Jubbooyinka, waxaana ay dadkii mudaaharadaayey ku eedeeyeen in aanu daacad ka ahayn siyaasadda dalka.